Tsy manaiky ny fitaoman'ny mpanota isika
"Anaka, raha taomin'ny mpanota hianao, aza manaiky (...) Fa ny tongony mihazakazaka ho amin'ny ratsy sady, faingana handatsa-dra." - Ohab. 1:10,16.
Tsy azo antoka ho an'izay heverina ho mpanara-dia an'i Kristy ny mikambana amin'ny mpanao an-tsirambina sy ny tsy hendry. Ho mora foana mantsy ny hananany fomba fijery tahaka ireo ka hanadinoany ny hevitr'izany atao hoe mpanara-dia an'i Jesôsy izany. Tandremo ny tenanao mikasika io lafiny manokana io. Aza mety hotaomina na havilin'ireo izay efa fantatrao amin'ny teniny sy ny asany fa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra. — Y1, 05 Jolay 1894.
Henoy ny feon'Andriamanitra, "Anaka, raha taomin'ny mpanota ianao, aza manaiky". Ireo izay eo ambany fifehezan'ny Fanahin'Andriatnanitra dia tokony hamoha mandrakariva ny fahaizany mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Efa tonga mantsy ny fotoana hizahan-toetra ny fahatokiany sy ny fahamarinany amin'Andriamanitra sy amin'ny olona tahaka azy. Aza manao ny tsy marina na dia kely akory aza mba hahazoan-tombontsoa. Ataovy amin'ny hafa, na eo amin'ny lafin-javatra kely izany na lehibe, izay tianao hataony aminao, Hoy Andriamanitra: "hianareo no vavolombeloko". Tokony hiasa eo amin'ny toerako ianareo. Raha azo natao ny nanakipaka ny lamba hampiharihary ny takona, dia ho hitanao ny lanitra manontolo mandinika amim-pahalianana fatratra ny olona izay alaim-panahy. Raha tsy manaiky ho resin'ny fahavalo ianao, dia misy fifaliana any an-danitra. Akaro any an-danitra ny vavaka rehefa renao ny tolo-kevitra voalohany hanao ratsy. Tohero mafy ny fakam-panahy hampihatra tsimoramora ireo fitsipika melohin'ny Tenin'Andriamanitra. Vantany vao tonga ny fakam-panahy, dia tohero tsy amim-pisalasalana izany mba tsy hiverimberina intsony. Miala amin'izay sahy mampiseho fomba fanao tsy izy taminao. Mandosira ny mpaka fanahy sady lazao aminy hoe: tsy maintsy miala amin'ny fitaomanao aho, satria fantatro fa tsy mandeha eo amin'izay nalehan'ny Mpamonjy ianao.
Na dia mahatsiaro ho tsy mahavita miteny ireo izay mbola ao anatin'ny fomba amam-panao tsy izy aza ianao, dia mialà aminy. Mety hanan-kery be lavitra mihoatra noho ny teny ny fialanao sy ny fanginanao (...) Mazotoa manao ny marina. R1-1, 09 May 1899.